Momba anay - Ding Zhou Tian Yilong Metal Products Co., Ltd.
Izahay, combo famokarana sy varotra, orinasam-pianakaviana miasa amina asa mitohy hatramin'ny 1990. Mamokatra sy manondrana vokatra faran'izay betsaka ny fifangaroan'ny tariby, ny harato tariby ary ny fefy ary zavatra mifandraika amin'izany izahay. Izahay no loharano atokisanao amin'ny fitakiana wire wire anao rehetra.
Izahay dia manolo-tena hanome vokatra kalitao izay maneho ny lanja faran'izay tsara sy fakan-tahaka ho an'ny mpanjifa amin'ny ambaratonga rehetra amin'ny orinasa. Ny fanjakàn'ny fitaovan'ny zavakanto, ny traikefa lehibe, ny fifehezana kalitao siantifika ary ny ekipa manolo-tena dia manome vahaolana feno harato tariby ho an'ny fampiharana manerantany. Anisan'izany ny:
Harato tariby akoho, harato voarary sy voarary ao amin'ny GAW, GBW, PVC mifono vy ary vy tsy miangatra, fefy rojo rojo, Welded tariby harato, Tariby nandrisika, Tariby barbed, PVC mifono tariby
Izahay dia mitazona magazay be dia be ary afaka manafatra entana manokana avy amin'ny orinasa hafa izahay. Amin'ny fifikirana amin'ny fitsipiky ny "kalitao tsara indrindra, fandefasana haingana, serivisy haingana", dia nahazo laza tsara tany ampitan-dranomasina, anisan'izany i Eropa, Amerika, Azia atsimo atsinanana, afovoany atsinanana, Amerika avaratra, sns. Manantena ny hanana fotoana hametrahana ny fahalalana sy traikefa nandritra ny 25 taona hiara-miasa aminao!
Ny raiko dia nanomboka tao amin'ny milina fanenomana Chicken Wire tao an-trano, nivarotra ny harato teto an-toerana.
Niorina i Dingzhou Tengda Metal Factory. Masinina fanaovana sary an-tariby maromaro no novidina, araka izany no laharam-pamokarana voalohany. Q195 (6.5mm) dia azo sintonina amin'ny fomba hafa amin'ny alàlan'ny milina fanaovana tariby.
Taorian'ny nanangonana ny ezaka sy ny fahalalana an'i yeas dia natsangana ny tsipika galvanizing voalohany. Ny vidin'ny fanamboarana tariby akoho sy harato azo averina dia azo avotana be. Tengda Factory dia mandroso dingana lehibe eo an-dàlana.
Nanatevin-daharana tamin'ny fomba ofisialy ny fikambanam-barotra eran-tany (WTO) i Sina, izay midika fa handeha hamindra any ivelany ny vokatra. Ary niroborobo ny varotra tamin'ny 2002-2004, nahazo maridre be izahay nandritra an'ity taona ity.
be ny fifantohana novolavolaina tamin'ny fanatsarana ny famokarana, ka manana maridre be.
orinasa lehibe no nitarina, vokatra maro kokoa no nentina tao. Makira roa vita amin'ny brunch no namboarina tao anatin'izay taona maro izay, ny iray dia mamokatra ny harato akoho akoho GAW (Galvanis aorian'ny fanenomana), ny iray kosa mamokatra tariby / harato tariby PVC mifono . Mandritra izany fotoana izany dia nohatsaraina ny tsipika fanaovana tariby, toy izany koa ny tsipika fanamafisam-peo. nataonay solon'ny solitany ny gazy, nihatsara be ny tontolo iainana noho ny teo aloha.
Amin'ny maha mpamatsy mety anao ahy, afaka manampy anao amin'ny:
Antoka avo lenta
tatitra momba ny kaontin'ny orinasa
Araho tsara ny fenitra CE
Faly aho mifandray sy manome vahaolana anao. Tena manantena
Ding Zhou Tian Yilong Metal Products Co., Ltd. misy ekipa matihanina. Ny fomba rehetra dia manana olona matihanina voampanga.
Amin'ny fanarahana ny fitsipiky ny "kalitao tsara indrindra. Serivisy matihanina. Fandefasana haingana." nahazo tombony isikalaza miaraka amin'ireo mpanjifantsika manerantany.